I-BWCDS010-16PD - I-OMG Amachweba Omzimba Wama-Ports Wired Wired 16 Wards Izixazululo ze-OMG
I-BWCDS010-16PD - Iziteshi ze-OMG 16 Ports Body Docking Station ezinokubonisa
Ukudluliselwa kwephuzu lokuphuka
Isistimu esebenzayo: Uhlelo lokuzenzakalelayo le-Win7, uhlelo lwe-XP / Win8 / Win10 olungakhethwa
Isoftware Yokuphathwa Kwesiteshi Sokudonsa: Uhlelo lokuphatha idatha yomsindo nevidiyo
Ukwakheka Nokubukeka: Umklamo ohlanganisiwe obekwe odongeni, insimbi eshidi, imishini ye-CsNC, isicwebezelisi esiphakeme, ukuqeda ukubhaka, njll.
Isikrini sokuthinta: I-17.3-inch capacitive multi-touch
Isikhombisi se-USB: I-Hub yezimboni engu-16-port, ukukhonjwa okuzimele, ukunikezwa kwamandla okuzimele, i-single-port yamanje 1.6A, kanye ne-2 * 2.0USB interface
Isikrini se-LCD: Isikrini se-LCD esingu-17.3-intshi
Audio: I-integrated realtek ALC887, i-chip yesiteshi somsindo esingu-8
Ukukhanya: I-250cd / ㎡
Ukulungiswa: 1920 x 1080
Ukungafani: 1000: 01: 00
Imisebenzi eminingi: Sekela inethiwekhi ye-WiFi, okuphuma kuyo ividiyo yangaphandle ye-HDMI HD
I-PCBA: I-PCBA Ehlanganisiwe Yezimboni
Ikhono lokukhumbula: 4GB
CPU: I-Intel l3 3110 Dual-Core 2.4hz
Isixhumanisi senethiwekhi: I-Onboard Realtek RTL8111F Gigabit LAN
IDiski Eqinile Yesitoreji: Izinga lokuqapha, i-4T ejwayelekile, ama-bays ama-4, ukusekelwa okuphezulu kwe-40T, ukusekelwa komsebenzi we-disk array (kuyakhetheka)
Iqoqo: Usekela amakhamera we-16 womzimba agqoke ukuqoqwa kanye nokushaja kanyekanye
Ukuqoqwa kwemininingwane okuzenzakalelayo: Imininingwane iqoqwa ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuthi ikhamera yomzimba ifinyeleleke. Ngokwenombolo yamaphoyisa, inombolo yemishini kanye nosuku lokuqoqa, ukwahlukaniswa kugcinwa bese kunikezwa iphoyisa elifanele.
Ukuhanjiswa kwedatha okuphezulu: Ijubane elikhulu le-300M / min, abasebenzisi bangenza ngokwezifiso isethi eyodwa yekhamera egqoke umzimba ukulayisha idatha. Noma kunamakhamera amaningi agqokwa ngomzimba alayisha idatha ngasikhathi sinye. Ubuchwepheshe bokulayisha idatha eminingi ukuze busebenzise ngokugcwele ukusebenza kwehadiware yesiteshi sokuma.
Ukulayisha Ifayela: Umsebenzi wokulayisha ngokubaluleka, ungabeka phambili noma iyiphi ikhamera egqoke umzimba. Ikhamera yomzimba ilayishwa kuqala, namanye amakhamera omzimba alindile.
Indlela yokusebenza: Ukuthinta okwenziwe ngokuthintekayo kanye nekhibhodi nokulawula okubabili kwegundane
Isitoreji sediski: Shintsha ngokuzenzakalela indawo yokubeka, sekela ukugcinwa kwe-disk okuningi, shintshela ngokuzenzakalelayo endaweni elandelayo yokugcina lapho idiski elilodwa ligcwele
Ukushaja okusheshayo: Ukuqoqwa kwedatha yekhamera yomzimba kuqediwe, futhi uhlelo lokusingathwa luyakhokhisa ngokuzenzakalelayo.
Ukuhlanzwa kwedatha okuzenzakalelayo: Ngemuva kokuthi ukuqoqwa kwedatha kuqediwe, ividiyo nevidiyo yomsindo ngaphakathi kwekhamera yomzimba iyahlanjwa ngokuzenzakalelayo.
Ukuhanjiswa Kwephula umthetho: Ukudluliselwa kokudluliselwa kokuphumula. Ukunqanyulwa ngengozi kwekhamera yomzimba ngesikhathi sokungenisa akuthinti ubuqotho kanye nobunye bemininingwane engenisiwe.
Ukubuka kwedatha: Usekela ukubuka, ukudlala, ukuthumela ngaphandle kanye nokususa idatha engenisiwe esiteshini sedokodo
Isikhathi esizenzakalelayo sedivayisi: Isekela ukulinganisa okuzenzakalelayo kwekhamera egqoke umzimba ngesiteshi sokuma kanye nokuvumelanisa neseva yesikhathi.
Umsebenzi wokubuyisa ifayela: Isekela ukuthola, ukudlala, ukuthekelisa, nokuphatha okufunwayo komsindo nevidiyo ngokuya ngezinketho eziningi njengegama lesikhulu samaphoyisa, isikhathi nohlobo lwefayela.
Umsebenzi wokuthumela idatha: Umsebenzisi angathumela imininingwane emvumelweni yensiza ethile yokugcina, futhi imininingwane ingasethelwa ukuthi ithunyelwe kuphela kudiski elikhethekile lezokuphepha le-U.
Ukuvikela Ezokuphepha: Akunandaba noma idatha iku-server noma esiteshini sedokodo, kuyinto elula kumsebenzisi wokugcina, ongakwazi ukusebenza kudatha yohlelo
Inkinobho yokushintsha: 1
Umsindo: Amaprosesa asekelwe
Ukunikezwa kwamandla kagesi: Ukuhlinzekwa kwamandla kwe-Industrial 250W
Indawo yokusebenza: -10 ℃ kuya -50 ℃
Izinga lokushisa eligcinwe: -20 ℃ kuya -60 ℃
Imodi yokuhambisa amandla: I-110-220V AC
Usayizi: 840mm * 500mm * 120mm
I-BWCDS010-16PD - Iziteshi ze-OMG 16 Ports Body Docking Station ezinokubonisa igcine ukuguqulwa: Agasti 7th, i-2020 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-207 Ukubuka kwe-1 Namuhla